Yonke into ekufuneka uyazi ukubala indawo yokuhlala | Ezezimali
Uyibala njani indawo yokuhlala
Ingxaki yezabasebenzi eSpain ayikapheli. Ewe, ingqesho iphuculwe kule minyaka mibini idlulileyo, incinci kakhulu, kodwa iphucukile, nangona intswela-ngqesho iphezulu kakhulu. Into eye yazisa nayo kukuba ingqesho evelisiweyo iguquguquka kakhulu kwaye kukho uninzi lwengeniso. Oko kuye kwenza uninzi lwabantu baseSpain baba ziingcali kwizinto ezininzi, kunye nesidingo sokuba njalo. Umzekelo kukwazi ibalwa njani indawo yokuhlala?
Nangona singafanele sicinge ukuba iinkampani ziyasikhohlisa, kufuneka sikhathale ngalo lonke ixesha, kuba kukho "iimpazamo" ezithanda iinkampani ngakumbi kunathi, abasebenzi bakho, kwaye asiqondi, asazi ukuba izibalo zichanekile na, kwaye ngamanye amaxesha, siqala ukunika utyikityo, ngaphandle kokuqiniseka ngayo nantoni na.
Yazi indlela yokubala indawo yokuhlala Iya kukuvumela ukuba uyazi yonke le nto kwaye uphephe iimpazamo ezinokukwenzakalisa, kwaye, ngaphezu kwako konke, yiya phambili kwinkampani.
Asitsho ukuba konke iinkampani zinobubi nobubi emhlabeni, kodwa kuhlala kulungile ukwazi yonke into echaphazela ipokotho yethu.
Ukuba ekupheleni kwenqaku unemibuzo, okanye ufumanise iimpazamo xa kubalwa indawo yokuhlala, Sikucebisa, okokuqala, ukuya kwinkampani ukusombulula iimpazamo ezinokubakho, kwaye ukuba akunakwenzeka, yiya ku igqwetha kwimicimbi yezabasebenzi, kwimanyano yakho, okanye kwintsebenziswano apho ubhalise khona.
1 Yintoni indawo yokuhlala
2 Ngaba ukubala kunye nokutyikitywa kokuhlala kunyanzelekile?
3 Kuquka ntoni ukutyikitywa kwetyala?
4 Yintoni ekufuneka ibandakanyiwe
5 Ibalwa njani indawo yokuhlala?
Yintoni indawo yokuhlala
Indawo yokuhlala ivela kwigama lesiLatini elithetha 'ukugqiba'.
Luluxwebhu olwenziwa xa ubudlelwane bengqesho phakathi komqeshwa kunye nenkampani buphela, nalapho kwamkelwa oko izibophelelo kunye nokuzibophelela kuzo zombini kuye kwahlawulwa ngexesha elifanelekileyo.
Uxwebhu olusemthethweni, kwaye luqulathe zonke iinkcukacha zobudlelwane ezihlanganisiweyo idatha ngokubanzi, iiholide ezihlawulelweyo, kunye neenkcukacha ezingapheliyo ukuba siza kukuxelela kamva.
Masithi, ngamanye amagama, intlawulo luxwebhu olusemthethweni apho amalungelo omntu kwinkampani elungelelanisiweyo, nayo yonke loo nto ichazayo kwaye isalindile okanye hayi.
Ukuhlawulwa kunokuchaza ukuba zonke izibophelelo zenkampani Kumqeshwa abakhuselweyo, kwaye ibhalansi ngu-zero, kodwa kananjalo, bekulindelwe iintsuku ezithile zeholide, okanye, ngokuchaseneyo, ukuba kushiyeke iintsuku ezimbini ngaphandle kwesizathu.
Ngaba ukubala kunye nokutyikitywa kokuhlala kunyanzelekile?
Ayimfuneko njengoko injalo kuphela intsalela yemeko yomsebenzi apho baveza khona, omabini amaqela, ukuba akukho matyala, okanye akho, achaza ukuba ayintoni kwaye aya kucinywa njani.
Nangona ngo umthetho uxwebhu lwenziwa xa ubudlelwane bengqesho buphela.
Isiginitsha yomqeshwa kufuneka ibekhona, kodwa inemiqathango ethile. Ukuba umqeshwa akavumanga, angatyikitya nelivo "engathobeli". Oko kukuthi, iyalamkela uxwebhu, kodwa hayi ubungakanani okanye iikhonsepthi eziqulathiweyo.
Ungala, kodwa oko kuthetha ukungafumani sixa semali sikuyo, kwaye kwezinye iimeko, ukuphulukana nexesha lokuqhubekeka nesibonelelo sokungaphangeli, ukuba unelungelo lokwenza oko.
Kuquka ntoni ukutyikitywa kwetyala?
Ukutyikitya ityala kuphela kuthetha ukuba ufumene isixa semali esimiselweyo. Oko akuthethi ukuba, njengoko besesikuxelele ngaphambili, ukwamkela ubungakanani kunye nokubala kwabo.
Iinkampani zihlala zibeka isicatshulwa apho utyikityo lubonisa ukuba umsebenzi uyayamkela, kwaye akukho mabango okanye ngcaciso inokwenziwa emva komhla wokutyikitywa koxwebhu. Kukhuselo olusemthethweni, olucacileyo olusetyenziswa ngabantu abaninzi.
Into ekufuneka uyenzile, Siyanyanzelisa, sixele ukungavumelani kwakho, utyikitye kwaye ubeke ilivo elithi 'Ndifumene ukungathobeli'.
Ukuba awusayini, kuya kufuneka ulinge kunye nezinye iinkqubo ezithatha ixesha. Inkqubo kunye nemfuno ziya kuba phambi kweNkonzo yoLamlo, yokuLamla kunye noXolelwaniso (i-SMAC).
Yintoni ekufuneka ibandakanyiwe
Phambi kokubona ukuba indawo yokuhlala ibalwa njani, kuya kufuneka ubenakho ukuyiqonda idatha equlathe uxwebhu, kunye nokuba kufuneka iqulathe ntoni, ukuba kukho nayiphi na engaveliyo.
Oko kufanele ukubandakanywa koku kulandelayo:
Idatha ngokubanzi, epheleleyo yenkampani kunye nomsebenzi obandakanyekayo kubudlelwane bengqesho
Umvuzo usalinde ukuhlawulwa kude kube ngumzuzu wokukhutshwa kwentlawulo
Inxalenye yentlawulo (i) yeentlawulo ezingaqhelekanga anelungelo lomsebenzi
Isabelo esilinganiselweyo somvuzo wenzuzo
Iiholide azonwabiswanga ngumsebenzi. Ziyi-2,5 ngenyanga.
Izibonelelo ezingahlawulwanga, ezibonakala kwisivumelwano, ezinje ngamabhaso okuvelisa, ukugcina ixesha, ixesha elongezelelekileyo, njl.
Onke amatyala, ngaso nasiphi na isizathu
Isixa sembuyekezo akufuneki sivele kwintlawuloAmaxesha amaninzi kongezwa kwileta yokugxothwa, okanye ngokweenkcukacha kuxwebhu olupheleleyo lweli candelo.
Kwaye akukho mfuneko yokuba uxwebhu luqulathe igama 'ukuhlaliswa' kwisihloko, okoko ukwahlulwa kweekhonsepthi kunye nomxholo webhalansi yamatyala, yithathe kancinci into emalunga nayo.
Kukwabalulekile ukucela uyilo okanye ukuqhubela phambili kwetyala ukuze ujonge iimali kwaye ucacise yonke into ngaphambi kokuhlawulwa kokugqibela.
Ibalwa njani indawo yokuhlala?
Akunzima kakhulu ukubala ukuhlala okuhambelana nawe, kunye neminye imisebenzi kunye nemigaqo kwabathathu uyakuyenza malunga nemizuzu eli-10 ubuninzi.
Uya kuzidinga ezi datha, ngezixa zazo ngqo:
Umvuzo wexesha lokugqibela
Iiholide onelungelo kuzo, kodwa ungakhange uzonwabele
Thatha umzekelo womsebenzi owadendwa ngoSeptemba 22. Umvuzo wakhe wawuyi- € 1.000 ngenyanga (ungumsebenzi onethamsanqa) ngentlawulo ye- € 100 ngohambo, kunye neentlawulo ezimbini ezongezelelweyo ze- € 1000.
Kuya kufuneka sibale umvuzo wemihla ngemihla.
Oko kukuthi, sidibanisa i- € 1.000 kunye ne- € 100 yohambo kwaye sahlule ngo-30, iintsuku ezenza inyanga, ngerhafu.
Le yile: € 1.100 / 30 yeentsuku: € 36,66 ngosuku.
Ukuba wagxothwa ngoSeptemba 22, kwaye wonke umvuzo wakho uhlawulwe, ityala ke lelo ngeentsuku ezingama-22 kuphela
Siphinda-phinda i- € 36,66 ngeentsuku ezingama-22.
Ityala yi- $ 806,52.
Ngoku makhe sibale iintsuku zeholide.
Masiqale sibale iintsuku.
Sinazo iintsuku eziyi-2,5 ngenyanga. Kude kube ngu-Agasti, umsebenzi kumzekelo uneentsuku ezingama-20. Oko wagxothwa ngoSeptemba, ke uneentsuku eziyi-1,6 kude kube nge-22 kaSeptemba.
Siphinda-phinda iintsuku ezingama-21,6 ngomvuzo wemihla ngemihla, nge- € 36,66.
Ngeholide, njengoko ebengenakonwabela naluphi na usuku, yi- € 791.85.
Ngoku kufuneka sibale intlawulo eyongezelelweyo
Iintlawulo ezongezelelweyo zahlulwe zangamaxesha amabini, avaliweyo ngoJanuwari 1 noJulayi 1.
Njengoko lo msebenzi ebesebenza de kube ngu-Septemba 22, unelungelo lokufumana intlawulo eyongezelelweyo yehlobo, eyi- € 1.000.
Kwisemester yesibini, usebenze iintsuku ezingama-82.
Siphinda-phinda iintsuku ezingama-82. Njengakwisemester nganye, yi- € 1.000 phakathi kweentsuku ezili-180 (isiqingatha sonyaka), kwaye iphindaphindwe ngeentsuku ezingama-82 ezithathayo. Ziyi- € 453.03.
Ngoku sibala indawo yokuhlala.
Songeza: Umvuzo + weeholide + intlawulo eyongezelelweyo.
Kule meko: € 806,52 + € 791.85 + € 1.453.03.
Indawo yokuhlala kufuneka ibe yi-3.051,4.
Ukuba kukho ubuninzi obuninzi obukwikhontrakthi, kufuneka bongezwe kwelo nani lipheleleyo.
Endaweni yoko, masicinge ukuba uyonwabele eyakho Iintsuku zekhalenda ezingama-30, kwaye zihambelana kuphela nama-21,6 njengoko sibonile. Emva koko, isixa-mali siya kukhutshwa kwaye singadityaniswa kwisambuku sisonke, siyitshintshe ngokupheleleyo isixa sokuhlawula phantse i-600 euros engaphantsi.
Kukwenzeka okufanayo ngentlawulo eyongezelelweyo: Ukuba umsebenzi ebefumene ezi ntlawulo zimbini zarhoqo ngenyanga, bekungasayi kubakho kubalwa kubalwayo, kuphela iholide kunye nomvuzo, kunye nokutshintsha imali kwiimali ezahlukileyo kakhulu.
Kuyafana ukuba intlawulo eyongezelelweyo endaweni yokuhlawulwa semi-ngonyaka, ihlawulwe rhoqo ngonyaka, izixa ziyatshintsha.
Ukuphonononga zonke ezo nkcukacha, kwaye uzisekele kwisivumelwano.
Khange sitsho ngawe kwi Ndiyibala intlawulo yakho yokuyeka inkonzo, kuba oko kuhlala kuxwebhu olunye okanye kwileta yakho yokugxothwa kwaye ayisiyiyo eyokuhlawula, ngesiqhelo, kwaye ibalwa ngokwahlukeneyo kuyo.
Ukongeza, ukuba bekukho amatyala asuka kwinkampani ukuya kwinkampani, umzekelo, inkokhelo yomvuzo, ukuthengwa kweemveliso zabo, umzekelo, isixhobo sombane, bayasuswa kwitotali eqokelelweyo.
Ngamanye amaxesha iziphumo zibi kumqeshwa, kwaye ngamanye amaxesha, zikhokelela kwi-zeros, yonke into inokwenzeka kubalo olunje.
Uhlawulo lulungelelwaniso lwezibophelelo zenkampani kunye nomsebenzi kunye nokunye, kude kube ngumzuzu wokuphela kobudlelwane bengqesho. Babandakanya ukulinda intlawulo eqokelelwe sisivumelwano, enokuthi ixhase umsebenzi okanye inkampani.
Yiya egqwethweni oyingcali, kwaye utyikitye ngokwento oyifumanayo, ngaphandle kokunyanzelwa yinkampani, kwaye usoloko unentsomi 'engathobeli' ukuba kukho into engaqhelekanga kwindawo yokuhlala.
Bala ngokwakho indawo yokuhlalaNjengoko ubona, kulula kakhulu, kwaye ngaphezulu kwako konke, ngokukhawuleza, kwi-intanethi kukho iinkqubo ezininzi kunye neefom ezibala ngokuzenzekelayo, ukuba awuzithembi izibalo zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Uyibala njani indawo yokuhlala
Ngaba uyazi ukuba ungayisebenzisa njani i-stock rebound?
Amakhadi avela kwiivenkile zesebe enza ukuthenga okungabizi kakhulu